दोलखामा ८४ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण
दोलखा (अस) । दोलखामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ८४ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण पूरा भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका अनुसार सो अवधिमा ५५ हजार १०० निजी आवास निर्माण भएको हो । कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म २ हजार ६८९ भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्...
अघिल्लो वर्षभन्दा रू.८ अर्ब राजस्व बढी संकलन
साउन ६, चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत वर्ष रू.८ अर्ब २१ करोड ५४ लाख ९ हजार बढी राजस्व संकलन गरेको छ । सो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा रू. ३० अर्ब २ करोड ९० लाख ७ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको रू. ३५ करोड राजस्व थपिने क्रममा रहेको छ । अघ...
न्यून बजेटले १४० खानेपानी आयोजना अलपत्र
साउन ६, काभ्रेपलाञ्चोक । आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा न्यून बजेटका कारण असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १४० ओटा खानेपानी आयोजनाको काम रोकिएका छन् । न्यून बजेटले क्रमागत आयोजनाअन्तर्गत २०७३ सालमा शुरु गरी २०७६ असार मसान्तसम्ममा...
ट्राफिक कार्यालय चितवनद्वारा ३ करोड राजस्व संकलन
चितवन (अस) । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, चितवनले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारीसाधनको कारबाहीबाट ३ करोड ७ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने ७ हजार ८४५ सवारीसाधनबाट सबैभन्दा धेरै ६२ लाख ९९ हजार असुली भएको छ । यसैगरी सीटबेल्ट र हेल्मेट नलगाएका २ हजार ८८ च...
साउन ५, हेटौंडा । भारी वर्षाका कारण ठाउँ-ठाउँमा पहिरो गएर अवरुद्ध बनेको तराई तथा भित्री मधेशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो मार्ग हेटौंडा–कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं मार्ग आइतवार बिहानदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ । १० दिन लगाएर पहिरो पन्छाएपछि बाटो सञ्चालन भएको हो । ...
रू.३ करोड खर्चिएको रोशी पुल २ महीनामै भासियो
साउन ५, काभ्रेपलाञ्चोक । निर्माण भएको दुई महीनामै काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–१० साल्मिटार र वडा नं ११ बल्थली जोड्ने रोशीखोलाको पुल साल्मिटारतर्फ भासिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालयमार्फत बन्दना भगवती जेभी नामक निर...
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र एक वडा, एक रङ
साउन ४, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र एक वडा एक रङ गरिने भएको छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका २९ वडामा रङको चयन गरी सबै घरमा सोहीअनुरुप रङरोगन गरिने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार यस...
इँटा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई धुलो दिने योजना
साउन ४, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरका सडकबाट सङ्कलन गरेको धुलोलाई इँटा बनाउन दिने भएको छ । महानगरभित्र यान्त्रिक कुचो (ब्रुमर) ले दैनिक संकलन गर्ने फोहरलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले इँटा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई धुलो दिने योजना बनाइएको महानगरले बताएको छ । यान्...
मुलुकभर भारी वर्षाको सम्भावना
साउन ४, काठमाडौं । बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको प्रभावले शनिवार देशका केही स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ । महाशाखाले शनिवार एक विशेष बुलेटिन जारी गर्दै मनसुनी न्यूनचापीय र...